အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နှင့်ဒုက္ခသည်များအဘို့အပညာသင်ဆုများ | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
Chandler ခရစ်ယာန်များကဓာတ်ပုံ, CC ကို.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, ကျောင်းသားများကိုဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုအတွက်ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရန်အဘို့အကဘုံဖြစ်ပါသည် (ပိုက်ဆံ) သူတို့ကိုကောလိပ်များအတွက်ပေးဆောင်ကူညီရန်. ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအဆိုပါပညာသင်ဆုဒုက္ခသည်နှင့်လူဝင်မှုကျောင်းသားများအတွက်များမှာ. သူတို့ထဲကတချို့ကအဘို့ဖြစ်ကြ၏ “ပထမမျိုးဆက်” ကျောင်းသားများအတွက်. ဒါဟာသင့်ရဲ့မိဘများရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသို့မဟုတ်ဒုက္ခသည်များဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုလိုနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာအစငျသညျယခုနိုင်ငံသားရှိသူတစ်ဦးလူဝင်မှုသို့မဟုတ်ဒုက္ခသည်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုနိုင်ပါတယ်.
CharterUp အမျိုးသား ပညာတတ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ
တစ်ခုမှာပညာသင်ဆု $10,000 နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်. ဤ ပညာတတ် Non-ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲဖြစ်ပါသည်. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လာမည့်နှစ်တွင်ပြန်မရကြလိမ့်မည်ကိုဆိုလိုသည်. ဒါဟာတဦးတည်းပညာသင်နှစ်မှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. လျှောက်ထားသည့် U.S ပြင်ပတွင်မွေးဖွားရပါမည်နှင့်ပြီးသားကျောင်းမှာဖြစ်ရမည် (သို့မဟုတ်လက်ခံခဲ့သည်) တစ်ဦးအသိအမှတ်ပြု U.S ကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်မှာအချိန်ပြည့်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားအဖြစ်. ကောလိပ်ကျောင်းများတွင်ကျောင်းအပ်ခငျြတဲ့သူအထက်တန်းကျောင်းကျကွီးရှယျအိုမြားလည်းအရည်အချင်းပြည့်မီ. မကြာသေးမီကမှတ်တမ်းတစ်ခု GPA ကိုပြသရပါမည် 3.4 သို့မဟုတ် သာ. ကြီး.
ဖုန်းနံပါတ်: (866) 315-8261
အဆိုပါ Dream.US ပညာသင်ဆု - အမျိုးသားပညာသင်ဆု
အိပ်မက်ကိုမြင်များအတွက်တတ်နိုင်သမျှထောက်ပံ့ကြေးနှင့်အတူပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲပညာသင်ဆု (DACA နှင့် TPS). တစ်ဦးကထောက်ပံ့ကြေးသင်သည်သင်၏ပညာသင်ဆုအပြင်လက်ခံရရှိနိုင်ငွေပေါင်းလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်. သင့်အနေဖြင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့တွဲဖက်သို့မဟုတ်ဘွဲ့အစီအစဉ်တွင်အချိန်ပြည့်စာရင်းသွင်းဖို့စီစဉ်ရဦးမည်. အထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ် HSE ဒီပလိုမာ) GPA ရှိရမည် 2.5+. ရပ်ရွာကောလိပ်ဘွဲ့ရ GPA ရှိရမည် 3.0+. သင်တစ်ဦးဖက်ကောလိပ်မှာ In-ပြည်နယ်ကျူရှင်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသူဖြစ်ရမည်.
ဖုန်းနံပါတ်: (855) 670-4787
အဆိုပါအိပ်မက်. အမေရိကန်ပညာသင်ဆု - အခွင့်အလမ်းပညာသင်ဆု
အိပ်မက်ကိုမြင်ဘို့ပညာသင်ဆု (DACA သို့မဟုတ် TPS) သူတို့ Out-of-ပြည်နယ်ကျူရှင်ပေးချေရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ပြည်နယ်အတွင်းရှိကျောင်းများမှလက်ခံခဲ့သည်မည်မဟုတ်ပါရှိရာပြည်နယ်များတှငျနထေိုငျ. သငျသညျ GPA နှင့်အတူအထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ်ရရှိခဲ့သည် HSE ဒီပလိုမာဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် 2.8+ .
အာဖရိကန်အမေရိကန်များအတွက်ပညာသင်ဆုများ, အမေရိကန်အိန္ဒိယ / Alaska Native *, အာရှပစိဖိတ်ကျွန်းသားအမေရိကန်, နှင့်ဟစ်စပန်းနစ်အမေရိကန်ကျောင်းသားများအတွက်. သင်တစ်ဦးရှိရမည် “သိသာထင်ရှားသောဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်” အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ. သငျသညျကငျြ့သုံးနိုငျလျှင်သင်သင့်မိသားစုကိုသူတို့ကဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ငွေဘယ်လောက်ဝေမျှဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.
ထိတှေ့: http မှာအွန်လိုင်းပုံစံ://gmsp.org/a-contact-us/#
နယူးအမေရိကန်များအတွက်ပေါလုနှင့် Daisy Soros ၏ Fellowship
တစ်ဦးက $90,000 ကျော်ချီးမြှင့်2ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်နှစ်ပေါင်း, ဒုက္ခသည်များ, နှင့်ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်အမေရိကန်တွေ. သင်တစ်ဦးဘွဲ့ရဒီဂရီပရိုဂရမ်တစ်ခုအတွက်အချိန်ပြည့်စာရင်းသွင်းဖို့စီစဉ်ရဦးမည်. သင်တို့သည်လည်းနှစ်အောက်ဖြစ် mus 31.
ဖုန်းနံပါတ်: (212) 547-6926
နှစ် $1000 ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသို့မဟုတ်သားသမီးတို့အဘို့ပညာသင်ဆု. အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်သင်တစ်ဦး 4-တစ်နှစ်ကောလိပ်အတွက်ဖြစ်ရပါမည်သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦး 4-တစ်နှစ်ကောလိပ်ကလက်ခံခဲ့ကြရပါမည်. သင့်ရဲ့ GPA ဖြစ်ရမည် 3.0 သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ.
In-လူတစ်အခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်း non-profit / အွန်လိုင်းထောက်ခံမှု. သူတို့ကကောလိပ်ကျောင်းကနေသူတို့ရဲ့ကောလိပ်လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်၏အစမှ၎င်းတို့၏ကျောင်းဆင်းပွဲမှဝင်ငွေနည်းကျောင်းသားများအားများကိုပညာသင်ဆု.
ဖုန်းနံပါတ်: 415 652-2766
ပညာသင်ဆုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ Rising ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ
အထိ၏ပညာသင်ဆု $7,000 ဝင်ငွေနည်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်. သငျသညျအထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့ရသို့မဟုတ်ကောလိပ်နှင့်ဘွဲ့ရအစီအစဉ်များအတွက်စာရင်းသွင်းရမည်ဖြစ်သည်. သငျသညျတှငျနထေိုငျသို့မဟုတ် San Francisco Bay Area ထဲမှာကျောင်းတက်ရမယ်.
ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်လူဝင်မှုကျောင်းသားများအတွက်ပညာသင်ဆု. သင်တစ်ဦး U.S ဖြစ်ရမည်. နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနေထိုင်ဥပဒေရေးရာနေထိုင်သူ.
ဖုန်းနံပါတ်: (877) 968-6328
တောင်ပိုင်းမိန်းကွန်မြူနတီကောလိပ်တက်ရောက်ရန်တစ်ဦးက 2-တစ်နှစ်ပညာသင်ဆု. ဒါဟာလက်ပံအထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့ရတစ်ဦးအာဖရိကလူဝင်မှုမှချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်.
ဖုန်းနံပါတ်: (207) 741-5957
Grand Rapids အဝန်းဖောင်ဒေးရှင်း
ကျော်စာရင်းတစ်ခု 70 ကျောင်းသားဘွဲ့ရဘို့တလျှောက်လွှာနှင့်အတူပညာသင်ဆု. သငျသညျ Kent ကောင်တီအထက်တန်းကျောင်းမှာနေထိုင်ရမယ်. သင်တို့သည်လည်း Allegan အတွက်အထက်တန်းကျောင်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်, barry, Ionia, အော့တဝါ, Montcalm, Muskegon, သို့မဟုတ် Newaygo ခု.
ဖုန်းနံပါတ်: (616) 454-1751 Ext. 103
အီးမေးလ်ပို့ရန်: (ပညာရေးအစီအစဉ်အရာရှိချုပ်ရုသသည်ဆရာတော်) rbishop@grfoundation.org
ပါရာဒိုင်းဖောင်ဒေးရှင်းမှပညာသင်ဆု / DH Gustafson မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်အမေရိကန်တွေသို့မဟုတ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတစ်ပညာသင်ဆု. သင်တစ်ဦး Eagan မှဘွဲ့ရထားရပါမည်, မင်နီဆိုတာအထက်တန်းကျောင်း. သင်ဤပညာသင်ဆုဘို့တလျှောက်လွှာနှင့်အတူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်နှင့် 100+ အဆိုပါ Eagan ဖောင်ဒေးရှင်းမှအခြားပညာသင်ဆုများ.
North Carolina ပြည်နယ်ရှိ
ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက် U.S များအတွက်ပညာသင်ဆု. နိုင်ငံသားများ, ဒုက္ခသည်များ, နှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတစ်ဦးဝိတ်ကောင်တီအထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့ရ. သငျသညျလျှောက်ထားရန်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများမလိုအပ်ပါဘူး.
ဖုန်းနံပါတ်: (919) 474-8370 Ext. 4028
အဆိုပါဒုက္ခသည် Connect ကိုကျောင်းသားပညာသင်ဆု
သာ. ကွီးမွတျစင်စင်နာတီ tri-ပြည်နယ်ဧရိယာ၌နေထိုင်သည့်ဒုက္ခသည်များအတွက်ပညာသင်ဆု. အားလုံးဒုက္ခသည်တွေလူထုမှာအဆင့်မြင့်ပညာရေးလိုက်စား, ကိုယ်ပိုင်, အဆိုပါ U.S အတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်. လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. အဘယ်သူမျှမအသက်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်.
ဖုန်းနံပါတ်: (513) 449-0368
၏ပညာသင်ဆု $500 တစ်ဦးပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်အမေရိကန်လူငယ်မှချီးမြှင့်. သငျသညျဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်ချက်သက်သေပြခြင်းနှင့်တဦးတက်ရောက်ရန်စီစဉ်ထားရပါမည်7Wyoming တက္ကသိုလ်အသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များ.
ဖုန်းနံပါတ်: (307) 777-6198
ဤသည်မှာအဘယ်သူ၏မိသားစုများတစ်ဦးအနိမ့်ဝင်ငွေရှိကျောင်းသားများကိုအဘို့ဖြစ်၏. တစ်ဦးကစွန့်လွှတ်သင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်မည်ဟုဆိုလိုသည်. သငျသညျအထိလေးကျောင်းများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. စွန့်လွှတ်အ U.S အတွက်ဝင်ငွေနည်း 11 နှင့် 12 တန်းကျောင်းသားများကိုရရှိနိုင်ပါသည်. သို့မဟုတ် U.S. နယ်မြေ. U.S. အ U.S အပြင်ဘက်တွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံသားများ. စမ်းသပ်မှုအခကြေးငွေသက်ညှာရှိသည်ဖို့နိုင်မည်အကြောင်း. သငျသညျအဆင့်၌ရှိကြ၏လျှင်သင် SAT ဘာသာရပ်စာမေးပွဲကြေးစွန့်လွှတ်ဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်9ဖြတ်. 12.
ဖုန်းနံပါတ်: (866) 630-9305
အမွေအနှစ်ဘာသာစကားကိုပြောဆိုကြသူများအဘို့အင်္ဂလိပ် (HLS ဖွ) အစီအစဉ်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်မှအဆင့်မြင့်မှသင်၏အင်္ဂလိပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်သော 8-တစ်လအစီအစဉ်ကို. တစ်ဦးကအပြည့်အဝပညာသင်ဆုအစီအစဉ်ကိုမှလက်ခံသူတွေကိုပေးလိမ့်မည်. သင် program နဲ့ပြုမိကြသောအခါဖက်ဒရယ်အစိုးရနဲ့အတူအလုပ်တစ်ခုရလိုအပ်ချက်ရပါမည်.
ဖုန်းနံပါတ်: (202) 687-4455
အဆိုပါ Ariane က de Rothschild (AdR) မိဿဟာယ: လူမှု Entrepreneurship & cross-ယဉ်ကျေးမှုကွန်ယက်
လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်လူမှုရေးခေါင်းဆောင်များတစ်နှစ်ပါတ်မိတ်သဟာယဖွဲ့. သငျသညျပေးဆောင်ကြသည်မဟုတ်ဘယ်မှာအလုပ်ရှိမိတ်သဟာယဖွဲ့. အစား, သငျသညျသစ်ကိုကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူနှင့်သင်ကူညီနိုင်သူကလူဖြည့်ဆည်းရ. သငျသညျတခုပြောင်းလဲမှုအတွက်အတိုးများနှင့် Cross-ယဉ်ကျေးမှုစကားပြောဆိုမှုရှိရမည်. ဒါကြောင့်ဂျူးနှင့်မွတ်စလင်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအကြားစကားပြောဆိုလျှင်ဒါဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်.
ထိတှေ့: http မှာအွန်လိုင်းပုံစံ://adrfellowship.org/contact/
ကက်သလစ်ကယ်ဆယ်ရေးန်ဆောင်မှုများနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး Fellows အစီအစဉ်
နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ကိုင်ကြသူလူများအတွက်တစ်ဦးက 12-တစ်လမိတ်သဟာယဖွဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခု. သငျသညျကိုနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာမှသက်ဆိုင်ရာတစ်ဦးလယ်ပြင်၌တစ်ဦးဘွဲ့ရဒီဂရီရှိရမည်. သင်တို့သည်လည်းအနည်းဆုံးကုန်ရပြီရမယ်6ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်ပင်လယ်ရပ်ခြားလအတွင်း. သငျသညျအင်္ဂလိပ်နှင့်ဒုတိယဘာသာစကားတွင်ကျွမ်းကျင်စွာဖြစ်ရမည်.
ဖုန်းနံပါတ်: (888) 277-7575
Molly Haley ဓာတ်ပုံယဉျကြေး, လက်ပံအရွယ်ရောက်ပညာရေးအစီအစဉ်.
တိကျတဲ့တက္ကသိုလ်များတက်ရောက်ကြသူအားကြီးသောဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်ချက်နှင့်အတူကျောင်းသားကျောင်းသူများအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူအာရှနှင့် / သို့မဟုတ် Pacific ကျွန်းများများအတွက်ပညာသင်ဆုများနှင့် / သို့မဟုတ်ကောလိပ်သှားဖို့သူတို့ရဲ့မိသားစုများအတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြောင်း (စာရင်းများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်မြင်).
ထိတှေ့: outreach@apiasf.org မှာကွင်းဆင်းနှင့် Community ဆက်ဆံရေး
အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ကျွန်းသားအတွက်တက်ကြွလှုပ်ရှားထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သူကျောင်းသားများအတွက်ပညာသင်ဆု (API ကို). ဒါဟာလိင်တူချစ်သူအဘို့လည်းဖြစ်ပါတယ်, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုး, Transgender များ, နှင့် queer (LGBTQ) US မှာနေတဲ့ကျောင်းမှာလေ့လာနေအသိုင်းအဝိုင်း.
ဖုန်းနံပါတ်: (415) 857-4272
လှုံ့ဆော်မှုဘွဲ့ကြိုနှင့်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများအတွက်ပညာသင်ဆု. သငျသညျသိပ္ပံလေ့လာနေအပေါ် planing ရမည်ဖြစ်သည်, အရှေ့တောင်အာရှအမွေအနှစ်ဆေးဘက်သို့မဟုတ်ဇီဝဗေဒကျောင်းသားများကို.
အာရပ်အမွေအနှစ်ကျောင်းသားတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အခြေခံပေါ်မှာချီးမြှင့်ပညာသင်ဆု. သင်တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်မှလျှောက်ထားခြင်းအပေါ် planing ရမည်ဖြစ်သည်, လေးနှစ်ကောလိပ်ကျောင်း, နှင့်ဘွဲ့ရကျောင်းက. အဆိုပါကျောင်းသည်က New York မှာဖြစ်ရပါမည်, ဂျာစီအသစ်, သို့မဟုတ်ကော်နက်.
ဖုန်းနံပါတ်: (347) 924-9674/ (917) 591-2177
အာရပ်အမေရိကန် Institute မှ
အာရပ်အမေရိကန်တွေဒါမှမဟုတ် U.S အတွက်လေ့လာနေအာရပ်နွယ်ဖွားတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရရှိနိုင်သောအများအပြားပညာသင်ဆု. ပညာသင်ဆုအပြည့်အဝစာရင်းများအတွက်က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး.
ဂျက်က G. Shaheen Mass ဆက်သွယ်ရေးပညာသင်ဆု
အာရပ်နွယ်ဖွားကျောင်းသားများအတွက်ပညာသင်ဆု. သင်တစ်ဦးအငယ်တန်းရှိရမည်, အကြီးတန်းသို့မဟုတ်မီဒီယာသို့မဟုတ်သတင်းစာပညာ၏လယ်ပြင်တွင်ဘွဲ့ရကျောင်းကမတက်ရောက်. သင်တို့သည်လည်းသတင်းစာပညာအထူးပြုနိုင်ပါသည်, ရေဒီယို, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် / သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်. သင်တစ်ဦးအငယ်တန်းသို့မဟုတ်အကြီးတန်းအဖြစ်ဘွဲ့ကြိုအစီအစဉ်တွင်ရှိရမည်. သင်တို့သည်လည်းတစ်ဘွဲ့ရအစီအစဉ်တွင်ရှိနိုင်ပါသည်.
ဖုန်းနံပါတ်: (202) 244-2990
အာရပ်အမေရိကန်ပညာရှင်များ၏ Network ကို
ထိတှေ့: http မှာအွန်လိုင်းပုံစံ://www.naaponline.org/about-naap/contact/
အာရပ်အမေရိကန်အင်ဂျင်နီယာများအသင်းနှင့်ဗိသုကာပညာရှင်များ (အို) – မြို့တော်ဧရိယာ
အချိန်ပြည့်ဘွဲ့ကြိုသို့မဟုတ်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများအတွက်ပညာသင်ဆု. သငျသညျအင်ဂျင်နီယာလေ့လာနေရမည်ဖြစ်သည်, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, သို့မဟုတ်အိုင်တီ. သငျသညျ AAAEA တစ်ဦးကလက်ရှိကျောင်းသားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ရပါမည် – မြို့တော်ဧရိယာတစ်ခုသို့မဟုတ်လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ကလေးတစ်ဦး.
ထိတှေ့: Yvonne အာဗြဟံသည်
ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်လူဝင်မှုကျောင်းသားများအတွက်ပညာသင်ဆု. တစ်ဦး U.S ဖြစ်ရမည်. နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနေထိုင်ဥပဒေရေးရာနေထိုင်သူ.
ဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးအီရန်နွယ်ဖွား၏ကျောင်းသားများအတွက်အကွိမျမြားစှာပညာသင်ဆု, ရပ်ရွာလူထုပါဝင်ပတ်သက်မှု, သို့မဟုတ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု.
ဟစ်စပန်းနစ် / လက်တင်
4-တစ်နှစ်ရှာကြံဟစ်စပန်းနစ်ကျောင်းသားများကိုသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ဒီဂရီများအတွက်ပညာသင်ဆု. ပညာသင်ဆုအနေဖြင့်အထိ $500 သို့ $5,000 ဆွေမျိုးလိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး.
ထိတှေ့: https မှာအွန်လိုင်းပုံစံ://www.hsf.net/en_US/contact-us
အဆိုပါ MALDEF ပညာသင်ဆုအရင်းအမြစ်လမ်းညွှန်
ပညာသင်ဆု၏စာရင်းတစ်ခု, အဆိုပါ MALDEF ဥပဒေကျောင်းပညာသင်ဆုအစီအစဉ်အပါအဝင်. ဒါကလက်တင်အသိုင်းအဝိုင်းများ၏နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတိုးတက်ချင်သောသူသည်ပညတ်တရားကျောင်းသားများကိုအဘို့ဖြစ်၏.
ထိတှေ့: http မှာအွန်လိုင်းပုံစံ://www.maldef.org/contact/index.html
Salvadorian အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့ (SALEF) ကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်မက်များပညာသင်ဆုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဖြည့်ဆည်း
ဗဟိုအမေရိကန်နှင့်ကောလိပ်ကျောင်းများတွင်ကျောင်းအပ်ခငျြတဲ့သူလက်တင်ကျောင်းသားများအတွက်ပညာသင်ဆု. သင်က Los Angeles မြို့ဧရိယာ၌နထေိုငျရမည်ဖြစ်သည်. ပညာသင်ဆုများမသက်ဆိုင်လူဝင်မှုအဆင့်အတန်း၏ကျောင်းသားအားလုံးမှပွင့်လင်းကြသည်.
ဖုန်းနံပါတ်: (213) 480-1052
ဖုန်းနံပါတ်: (734) 425-1600
အကျပ်အတည်းအတွက်အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဘို့အ IIE အဖွဲ့သည်ဆီးရီးယား Consortium
တစ်ဆီးရီးယား Consortium အဖွဲ့ဝင်တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန်စီစဉ်ဆီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်အပြည့်အဝနဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပညာသင်ဆု. သင်က website တွင်တက္ကသိုလ်များများစာရင်းကိုတွေ့နိုင်ပါသည်.
ဂလိုရီယာ Mattera အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရွှေ့ပြောင်းပညာသင်ဆုရန်ပုံငွေအဖွဲ့
ပညာသင်ဆုရကျိုးနပ် $500 ကျောင်းသားများကိုဝင်သို့မဟုတ်ကောလိပ်သို့မဟုတ်အခြားပညာရေးအစီအစဉ်များအတွက်စာရင်းသွင်းဘို့. ဒါဟာအထက်တန်းကျောင်းဖြည့်စွက်ပေမယ့်ကျောင်းပညာရေးကိုဆက်လက်နိုင်စွမ်း၏ဂတိတော်ကိုမပြခဲ့ဘူးတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လည်းဖြစ်ပါသည်.
ထိတှေ့: ခရစ်က Norton, ညွှန်ကြားရေးမှူး
အဆိုပါ Western Union ဖောင်ဒေးရှင်းမိသားစုပညာသင်ဆုအစီအစဉ်
၏ပညာသင်ဆု $2,500 ကောလိပ်ကျောင်းကိုသွားချင်တဲ့သူများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူငယ်များကိုထောကျပံ့ဖို့ဒီဇိုင်း. သငျသညျ၏အသက်အရွယ်အကြားဖြစ်ရပါမည် 18-26. သင်တစ်ဦးကို stem လယ်ကွင်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ရွေးချယ်ရမယ်.
လျ: (202) 686-8652
အဆိုပါပေါလုက & နယူးအမေရိကန်များအတွက် daisy Soros ၏အဖွဲ့
တစ်ဦးက $90,000 ပညာသင်ဆုကျော်ချီးမြှင့်2ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်နှစ်ပေါင်း, ဒုက္ခသည်များ, နှင့်ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်အမေရိကန်တွေ. သင်တစ်ဦးဘွဲ့ရဒီဂရီပရိုဂရမ်တစ်ခုအတွက်အချိန်ပြည့်စာရင်းသွင်းဖို့စီစဉ်ရဦးမည်. သင်တို့သည်လည်းနှစ်အောက်ဖြစ်ရမည် 31.
ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်နိုင်ငံသားများများအတွက်ပညာသင်ဆု, ဒုက္ခသည်များ, ဝိတ်ကောင်တီကျောင်းတက်ရောက်ခဲ့သို့မဟုတ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ, North Carolina ပြည်နယ်ရှိ. လိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမစာရွက်စာတမ်းများရှိပါတယ်.
Douvas သတိရအောက်မေ့ပညာသင်ဆု: ပထမဦးစွာမျိုးဆက်ကျောင်းသားများအမေရိကန်ပညာသင်ဆု
Wyoming အတွက်နေထိုင်ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်အမေရိကန်များအတွက်ပညာသင်ဆု. သင့်အနေဖြင့်ပြည်နယ်၏တဦးတည်းကိုတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ရဦးမည်7အသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များသို့မဟုတ် Wyoming တက္ကသိုလ်.
ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်အမေရိကန်တွေသို့မဟုတ် Eagan မှဘွဲ့ရရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်ပညာသင်ဆု, မင်နီဆိုတာအထက်တန်းကျောင်း. ဒီပညာသင်ဆုဘို့တလျှောက်လွှာနှင့်အတူ Apply နှင့် 100+ အဆိုပါ Eagan ဖောင်ဒေးရှင်းမှအတွင်းရှိအခြားပညာသင်ဆုများ.
ဖုန်းနံပါတ်: (651) 243-1198
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်ပညာသင်ဆု, ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်နိုင်ငံသားများ, သို့မဟုတ်ဒုက္ခသည်များ (အဘယ်သူမျှမစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်) အဘယ်သူသည်ဝိတ်ကောင်တီကျောင်းတက်ရောက်ခဲ့သည်, North Carolina ပြည်နယ်ရှိ.
ထိတှေ့: လူးဝစ် Narvaez
အထိ၏ပညာသင်ဆု $7,000 အထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့ရဝင်ငွေနည်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်. သင်တို့သည်လည်းတှငျနထေိုငျသူမြားကောလိပ်နှင့်ဘွဲ့ရအစီအစဉ်များအတွက်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ် / အဆိုပါ San Francisco Bay Area ထဲမှာကျောင်းတက်.
အကြီးအ-grade နှင့်အတူကျောင်းသားများအတွက်ပညာသင်ဆု. သင်တစ်ဦး 4-တစ်နှစ်ကောလိပ်မှာဘွဲ့ကြိုဘွဲ့လိုက်ရန်စီစဉ်ရဦးမည်. လျှောက်ထား DACA သို့မဟုတ် TPS များအတွက်အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်. သင်သည်အခပေး Intern များကိုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသူဖြစ်ရမည်.
ဗားမောင့်ရဲ့ဒုက္ခသည်နှင့်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်-ရှာကြံကျောင်းသားများအတွက်လိုအပ်နေသောူပည်သူ-based ပညာသင်ဆု. ဤသည်သာ Champlain ကောလိပ်တက်ရောက်ရန်စီစဉ်ကျောင်းသားများကိုအဘို့ဖြစ်၏.
ဖုန်းနံပါတ်: (802) 860-2777
ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအသေးစား Giants ပညာသင်ဆုရန်ပုံငွေအဖွဲ့
ဤသည်တစ်နှစ်ကြာမိတ်သဟာယဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးကမိဿသငျသညျသစ်ကိုကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူဖို့ရရာမရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာပါမောက္ခအဘို့ဖြစ်၏, သုတေသီများ, သူတို့ရဲ့နေအိမ်နိုင်ငံတွေမှာသူတို့ဘဝနှင့်အလုပ်အကိုင်များမှခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောသူနှင့်လူထုပညာတတ်.
ဖုန်းနံပါတ်: (212) 205-6486
အဆိုပါ Hegg တရားရုံးကရန်ပုံငွေအဖွဲ့
re-ဝင်၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လယ်ပြင်ချင်သောမိန်းမတို့အဘို့အ Professional ကသင်တန်းများ. လိုအပ်သောအမျိုးသားရေးစာမေးပွဲသွားသူတို့ရဲ့အသစ်သောနိုင်ငံသို့မဟုတ်သင်တန်းများသို့ပေါင်းစည်းမှုသည်ဘာသာစကားသင်တန်းများလည်းရှိပါတယ်.
ဖုန်းနံပါတ်: (+41) 22 731 2380
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ဒုက္ခသည်များအဘို့များစွာသောပညာသင်ဆုရှိပါတယ်. သငျသညျကိုထည့်သွင်းဖို့အခြားသူများရဲ့သိလျှင်, အီးမေးလ်ပို့ပါ: info@therefugeecenter.org. ကျနော်တို့စာရင်းသူတို့ကို add ပါလိမ့်မယ်.
သင်တို့သည်လည်းထောက်ပံ့ငွေများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၏အခြားကြင်နာတတ်သော. ဖက်ဒရယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအကူအညီများ၏ရုံးထောက်ပံ့ငွေကိုထောက်ပံ့ပေး, ချေးငွေများ, ကောလိပ်သို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကြောငျးအတှကျနှငျ့အလုပျ-လေ့လာမှုရန်ပုံငွေများ. သငျသညျအများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် အခမဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအကူအညီပေးရေးများအတွက်ဖက်ဒရယ်လျှောက်လွှာ (FAFSA).